Imandarmedia.com.np: एनआरएनको अध्यक्षमा भवन भट्ट विजयी, अरु कसले जिते ? (नामावलीसहित)
Big News, Main News, Prabas » एनआरएनको अध्यक्षमा भवन भट्ट विजयी, अरु कसले जिते ? (नामावलीसहित)
एनआरएनको अध्यक्षमा भवन भट्ट विजयी, अरु कसले जिते ? (नामावलीसहित)
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को अध्यक्षमा भवन भट्ट विजयी भएका छन् । अध्यक्षकी प्रत्यासी जमुना गुरुङलाई हराउँदै भट्ट विजयी भएका हुन् । नेपालको गोरखा जिल्लामा जन्मिएका भट्ट जापानका सफल व्यवसायी हुन् ।
मंगलबार बिहान सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार भट्ट ११९७ मतले विजयी भएका हुन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जमुना गुरुङ घलेको पक्षमा ५ सय ८४ मत खसेको थियो।
अध्यक्षमा पराजित गुरुङ निवर्तमान अध्यक्ष शेष घलेकी पत्नी हुन् । यसअघि एनआरएन आइसीसी सदस्य रहेकी उनी पनि अष्ट्रेलियाको धनी महिलाको सूचीमा पर्छिन् ।
महासचिवमा रसियाका डा. बद्री केसी पुनः निर्वाचित भएका छन् । डा. केसीको महासचिवमा यो दोस्रो कार्यकाल हो ।
सचिवमा ओमनका डीबी क्षेत्री र बेल्जियमकी जानकी गुरुङ विजयी भए । यसैगरी, कोषाध्यक्षमा हिक्मत थापा पुनः विजयी भएका छन् । सहकोषाध्यक्षमा सोमनाथ सापकोटा विजयी भएका छन् ।
युवा संयोजकमा जापानका सुदन थापा विजयी भएका छन् । महिला संयोजकमा बेल्जियमकी रजनी प्रधान विजयी भएकी छिन् ।